အထဲမှာ လူရှိလား ? | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Aha! Jokes, Satire » အထဲမှာ လူရှိလား ?
အထဲမှာ လူရှိလား ?
Posted by weiwei on Jun 7, 2011 in Aha! Jokes, Satire | 21 comments
ဒီကနေ့ မိသားစုတွေ စုံစုံညီညီနဲ့ စကားပြောကြရင်း အဖွားအကြောင်းတွေကို ပြန်ပြောဖြစ်ကြပါတယ်။ ကွယ်လွန်သွားတာကြာပြီဖြစ်တဲ့ အဖွားအကြောင်းထဲမှာမှ အသက် ၈၀ ကျော်အရွယ်က အဖွားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ အမှတ်တရ ဟာသလေးတစ်ခုကို ကျွန်မမောင်လေးက သတိတရ ပြန်ပြောပြပါတယ် …
တစ်ရက် မောင်လေးက အိမ်သာတံခါးကို စေ့ရုံစေ့ထားပြီး အိမ်သာတက်နေပါတယ်။ အဖွားက အိမ်သာထဲဝင်ချင်တော့ အိမ်သာထဲမှာ လူရှိ မရှိ မေးလိုက်ပါတယ်။
အဖွား။ ။ အိမ်သာထဲမှာ လူရှိသလားဟေ့ ….
မောင်လေး။ ။ အိမ်သာထဲမှာ လူမရှိပါဘူး … ဆိုပြီး အထဲကနေ ပြန်ဖြေလိုက်ပါတယ် …
မောင်လေး။ ။ အိမ်သာထဲမှာ လူမရှိပါဘူး …
အဲဒီလို ၃ ခါမေးတာကို ၃ ခါလုံးပြန်ဖြေပြီးတဲ့နောက် အဖွားက အိမ်သာတံခါးကို ဖွင့်လိုက်ပါတော့တယ် …..
အခုအချိန်မှာ ကျွန်မက အသက်သိပ်မကြီးသေးပေမယ့် အသက် ၈၀ ကျော်အဖွားဖြစ်သလိုမျိုး အခုကထဲက ဖြစ်နေပါတော့တယ် … ဦးနှောက်က စဉ်းစားရတာတွေများလွန်းတော့ တချို့ကိစ္စများကို မစဉ်းစားနိုင်တော့ပါ …. တလွဲတွေ အလွန်တွေးလွန်းသောကျွန်မကို စနောက်ချင်တာနဲ့ မောင်လေးက အဖွားရဲ့ အိမ်သာထဲမှာလူရှိလားနဲ့ ဥပမာပေးလိုက်တော့ တစ်မိသားစုလုံးအတွက် ဟာသဖြစ်သွားပါတော့တယ် ….
မဝေရေ ပြုံးမိသွားပါတယ်။ မမှီအဖွားလည်း ၈၂ နှစ် တခါတခါ မပြောရသေးဘူးထင်ပြီး ၃လေးခါ ထပ်ပြောတာတွေ အမေ့မေ့ အလျှော့လျှော့ ဖြစ်တာတွေဟာ သနားလည်းသနားစရာ ကောင်းပြီး ရယ်စရာလေးတွေ ဖြစ်ဖြစ်သွားတတ်တယ်။
အင်း…. အသက်ကြီးလာတဲ့ လူကြီးတွေ ဟာ တကယ် သနားဖို့ကောင်းတယ်
မဝေရေးထားတာလေးက ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းကို မြင်မိအောင်ပါပဲ … အသက်ကြီးလာတဲ့ သူတွေက သတိလဲ မေ့တက်သလို ပြောပြီးသားစကားကိုလဲ ခဏခဏ ပြန်ပြောတက်ကြတယ်နော် နွယ်ပင်တို့ အဖွားဆိုလဲ အသက်က (84) နှစ်ရှိပြီဆိုတော့ ဒီလိုမျိုး အဖြစ်ပျက်လေးတွေ မကြာခဏဆိုသလို ဖြစ်တက်ပါတယ် …
လူရှိပါတယ်ခင်ဗျ.. အောက်ဆုံးက.. Stats အရ..
32 guests,7members
etone တို့အဖွားဆိုလည်း တနေ့လုံးစကားပြောဖော်မရှိတော့ လူအိမ်မှာရှိတဲ့နေ့ဆို နောက်က တကောက်ကောက်လိုက်ပြောတယ်… ။ ကိုယ်က နားငြီးတော့ ပွစိပွစိလုပ်ရော… ။ နောက်ပိုင်း သူလည်း ပြောချင်တာပြော၊ ကိုယ်လည်း မကြားတချက် ၊ ကြားတချက်လုပ်နေလိုက်တော့တယ်… ။ နှစ်ဦးနှစ်ဘက် အဆင်ကိုပြေလို့…. ။
အင်း အသက်ကြီးတဲ့လူတွေက သနားဖို့ကောင်းတယ်နော် ကိုယ်လဲတစ်နေ့အသက်ကြီးလာရင် အဲလိုပဲဖြစ်လာမှာလေ
အလွန်တွေးလွန်းသောကျွန်မကို စနောက်ချင်တာနဲ့ မောင်လေးက အဖွားရဲ့ အိမ်သာထဲမှာလူရှိလားနဲ့ ဥပမာပေးလိုက်တော့ တစ်မိသားစုလုံးအတွက် ဟာသဖြစ်သွားပါတော့တယ် ….
ဒီအပိုင်းလေးကို နားမလည်လို့ နည်းနည်းလေး ရှင်းပြပေးစေချင်ပါတယ်ရှင်။ ဘယ်လိုမျိုးအဓိပ္ပာယ်လဲဆိုတာကိုပါ ရှေ့မှာ စကားဦးမသန်းထားတော့ အဘွားအကြောင်းပြောတာပဲဆိုတော့လေ…..
ဘယ်လိုရှင်းပြရမလဲ …. ဖတ်တဲ့သူ တွေးပြီးရီရအောင် ရေးလိုက်တာပါ … ဟာသကို ပြန်ရှင်းပြရရင် မရီရတော့ဘူး ဖြစ်သွားမှာပေါ့ …
မဝေက အခုအဖွားအကြောင်းရေးပြသလိုမျိုး ကြောင်တောင်တောင်ဖြစ်နေလို့ …
ကျနော်တို့ ခေတ်မှာ အသက်တိုလာတော့ ၀မေမေတို့ တုံမမတို့ နွင်ပယ်တို့ မှီမမတို့ရဲ့အဖွားတို့ရဲ့
ငါအိုသွားသောအခါ ဆိုတဲ့စာသားလေးကို ဖတ်မိရင် မေထက်ရဲ့ ရင်ထဲမှာ အရမ်းဝမ်းနည်းတယ်
မေထက်အင်တာနက်စသုံးတော့ အိမ်က ဘိုးဘိုးကိုပြောပြတယ် အင်တာနက်ထဲမှာဆိုဒ်တွေမှအများကြီး ဘဲလို့ ဗဟုသုတဆိုဒ်တွေ ဘုရားစာတွေဆိုရင် ဂျာနယ် တွေ ဆိုရင်မေထက် Print ထုပ်ပြီးယူလာတာ
ဘိုးဘိုးက ခေတ်ပညာတတ်မဟုတ်ဘူး ဘုန်းကြီးကျောင်းသားဆိုတာ ဘုရားစာဆိုရင် ဘာနေနေမေးလို့ ရတယ်။ ဘိုးဘိုးကိုနက်ဆိုင် ခေါ်သွားပြီး ဘုရားစာဆိုဒ်တွေကို ပြတယ် စာတွေထုပ်ပေးတယ်။
တစ်ခါတစ်ခါကျရင် ဘိုးဘိုးက အင်တာနက်တွေကိုဘယ်သူတွေက စတင်ပြုလုပ်တာလဲဆိုပြီး အမြဲတမ်းမေးတယ် အင်တာနက်နဲ့vzo တို့ရုပ်မြင်ရတာကိုလဲ ဘိုးဘိုးက အရမ်းထူးဆန်းနေတာလဲ။
တစ်ခါတစ်လေ ခဏခဏမေးတော့ မေထက်ကစိတ်တိုတာနဲ့ အော်အော်ပြစ်တယ်။ အဲဒီလို ပြောတဲ့အ ခါမေထက်စိတ်မကောင်းဘူး တစ်နေ့မှာ ဘိုးဘိုးက မေးတယ်ဟေ့ နက်ခဏ၀င်ကြည့်နေတာ ဘိုးဘိုးလို့ ဖြေလိုက်တယ်။ ဘိုးဘိုးက ငါမေးနက်တွေအရမ်းမသုံးနဲ့နော် ဘိုးဘိုးဂျာနယ်တွေဖတ်ရတယ် အဲဒီထဲမှာ ငါမြေးတစ်ခါတုန်းကပြောဖူးတဲ့ ချက်တင်တတ်တာဆိုတာကိုလေ ဘိုးဘိုးကပြောတယ် ချက်တင်ထဲကနေ ခင်ကြတယ် အပြင်မှာချိန်းတွေ့ကြတယ် နောက်ပြီး ရောင်းစားပြစ် တယ်ဆိုတာကို ဘိုးဘိုးကတစ်တွက်တွက် ပြောတယ် ကြာတော့နားငြီးတယ်ဆိုပြီး အဲဒီနေ့က တော်တော်လေးအော်ပြစ် တယ် ။ ဟိုးငယ်ငယ်လေးကတည်းက ဘိုးဘိုးနဲ့အတူတူနေခဲ့တာလေ သူငယ်တန်းကတဲကဆိုတာ မြေးဦးဆိုတော့လည်း အဆိုးဆုံးပေါ့။ အဲဒီလိုအော်ပြီး ညတန်းပြီးအိပ်တော့တယ် မနက်ကျဘိုးဘိုးကလမ်းလျှောက်ထွက်တော့မယ် ငါမြေး အိပ်ရာထတော့ဆိုပြီး နိုးသွားတယ်။ မေထက်လဲ အိပ်ရာကထ ရေချိုးပြီး မနက်စာစား အ၀တ်အစားလဲပြီး လွယ်အိတ်က ဗီရိုဘေးက တိုင်မှာချိတ်ထားတာဆိုတာ ဗီရိုကိုလက်တင်ပြီး ယူလိုက်တယ် အဲဒီမှာစာရွက်လေး ကပ်ထားတာတွေ့တယ် ငါအိုးသွားသောအခါ ဆိုတဲ့ စာရွက်ကလေးကပ်ပြီး ဘိုးဘိုးကို မနေ့ညနေက အော်ပြောလိုက်တာကို စိတ်မကောင်းအရမ်းဖြစ်သွားတယ်။ ဘိုးဘိုးနောက်ကိုလိုက်ပြီး တောင်းပန်မလို့ ဘိုးဘိုးကို ရှာမတွေ့တော့ဘူး ဘိုးဘိုးက အမျိုးတွေလျှောက်သွား နေတာလေ။ ညနေထိတိုင်စောင့်နေတာ ပြန်မလာဘူး မေထက်အဲဒါနဲ့မြို့ထဲမှာ ရှိတဲ့ (A) လမ်းကအမျိုးတွေကို သွားမေးတဲ့ပြန်သွားပြီလို့ပြောတယ် အဲဒါနဲ့လမ်းမှာရွှေကျီးမုန့်ဆိုင်ကနေ ဘိုးဘိုးကြိုက်တဲ့ မုန့်တွေဝယ်လာတယ် အိမ်ကျရင် ဘိုးဘိုးကိုတောင်းပန်ရမယ် ဆိုပြီး ပြန်လာခဲ့တယ်။ မေထက်အဲဒီနေ့ကကျောင်းတောင်မသွားနိုင်ဘူး အရမ်းဝမ်းနည်းလွန်းလို့လေ အိမ်ပြန်ရောက်တော့ ဘိုးဘိုးကမေထက်ကိုအရမ်းဆူတာ မြို့တည်းညနေခင်းကြီး လမ်းတွေအရမ်းရှုပ်နေတာကိုသွားတယ်ဆိုပြီးတော်လေ ကရုဏဒေါသနဲ့ ဆူတယ်။ နောက်ပြီး ကျတော့မနေ့ညနေက အဖြစ်အပျက်လေးကို ဘိုးဘိုးက မေထက်ကို စိုးရိမ်လို့ပြောတာဆိုတာ မေထက်နားလည်ပါပြီ နောက်ဆိုရင်ဘိုးဘိုးကို ဘယ်သောအခါမှ ပြန်မအော်တော့ပါဘူးလို့ကတိပေးပြီး ကန်တော့တောင်းပန်လိုက်တယ်လေ။ ဘိုးဘိုးဆိုရင်ပီတီ မျက်ရည်တွေကျလို့ အဲဒါကြောင့်မို့လို့ ဘိုးဘိုး၊ ဘွားဘွား၊ ဖေဖေ၊ မေမေ ၊ ဦးဦး၊ ဒေါ်ဒေါ်၊ တို့သက်ရှိထင်ရှားရှိနေတဲ့အချိန်မှာ ပြုစုဂရုစိုက်ရမယ်လေ။ မေထက်ရဲ့ဘ၀မှာ ဘိုးဘိုးနဲ့ အမှတ်တရလေးကတော့ ခုနကပြောပြတဲ့နေ့လေးပေါ့။
?? ။ ။ ……ခလွမ်း..
?? ။ ။ ….ကြောင်ပါခညာ….
အထဲမှာ ဘယ်သူရှိလဲ ဆိုလို့ သူငယ်ချင်း တယောက် ပြောတာ သွားသတိရတယ်။
သူ့မောင်လေး ၁၀နှစ် ၀န်းကျင်လောက်က အိမ်သာ တက်နေတုန်း အိမ်သာ တံခါးကို အမေ က မသိပဲ ဖွင့်လိုက်မိလို့.. နောက်ဖေးတိုက်တွေကလည်း သူ့ကို မြင်ကုန်ပါပြီ ဆိုပြီး တိုက်ပေါ်က ခုန်ချပြီး သတ်သေပါမယ် ဆိုပြီး ငိုလိုက် ယိုလိုက်နဲ့ မနည်းချော့လိုက်ရတယ်တဲ့..
သူငယ်ချင်းက သူ့မောင်ကို လူမသိ သူမသိ လျှို့ဝှက်ချက်ကြီး ဆိုပြီး အမြဲနောက်တယ်။
အထဲမှာ လူတွေ ကျန်သေးတယ် အများကြီးဘဲ
ဖြစ်တက်ပါတယ် ဒါမျိုးတွေက…… ကျွန်တော်လဲ ငယ်တယ် ဆိုပေမဲ့ တခါတခါ သတိလွတ်ချင် သလိုဖြစ်မိတယ်. ကို့ကိုယ်ကို လဲအမြဲသတိပေးနေရတယ် တခါတလေ ကြတော့ သူများကသတိပေးရတယ်.. တံခါးတောင် မခေါက်ရသေးဘူး *ဘဲ* ရှိတယ်ချည်း အော်နေတယ်…:)
ကျွီ …. (ညသန်းခေါင်ကျော်တွင် တံခါးဖွင့်သံ)
အဖွား ။ ။ သာခို လားဟေ့ ….
သူခိုး (သာခိုဆိုတာ အဖွားသားလားမသိဘူးဟုတွေးပြီး) ။ ။ ဟုတ်ပါတယ်အမေ …
အဖွား – သာခို သာခို
လို့ အော်တော့မှ သူခိုးလည်း ထွက်ပြေးရပါတော့တယ်…..
လူတွေက ကလေးဘ၀ ကို နှစ်ခါပြန်ကြုံရတယ်ထင်တယ်..
မွေးစတုန်းကတစ်ခါ အသက်ကြီးလာပြန်တော့လဲ ကလေးလိုဖြစ်သွားကြတာ..
ကျွန်တော့ အဖိုးနဲ့ အဖွားကို သတိရမိတယ်
ကျွန်တော်တို့ငယ်ငယ် က တောမှာနေတုန်းက အဖြစ်ပါ။
အဖိုးက အသက်ကြီးပြီး နားအကြား မကောင်းဘူး
မကြားတာတော့မဟုတ်ဘူး၊ တလွဲကြားတယ် ပြောရမလားဘဲ၊
အိမ်ရှေ့ကခေါ်တာအနောက်က ခေါ်တယ် ထင်တာမျိုးပေါ့၊
တည ညမှောင်မှောင် အချိန်ပေါ့။
ဆီးကသွားချင်နေတုန်း ဧည့်သည်က စကားမပြတ်ဖြစ်နေတယ်၊
စကားပြတ်တဲ့ အချိန် အိမ်သာ ကို အမြန်ပြေးသွားတယ်။
ဒါပေမဲ့ ပါးစပ်ကတော့.. “အိမ်သာထဲ ဘယ်သူရှိလဲ”.. လို့တော့ အော်လိုက်သေးဆိုဘဲ။
ကံဆိုးတဲ့ အဖွားက မီးမဖွင့် ဂလန့် မထိုးဘဲ အိမ်သာတက်နေတယ်လေ။
“ကိုဘချစ် ကျမ ဒီမှာ…..” စကားဆုံးအောင် မပြောလိုက်နိုင်ဘူး၊
မျက်နှာကို ရေပန်းနဲ့ အထိုးခံ လိုက်ရသလိုပါဘဲတဲ့။
ညအချိန်မတော် ကြီး ခေါင်းလျှော် ရေချိုးနဲ့ ..ကံကြီးလို့ အဖွား မသွားလိုက်တာဆိုဘဲ။
အဖိုးကိုမေးတော့ “အသံကြားတာ အနောက်ကထင်လို့”..တဲ့။
“အဖွား ဘာလို့ဂလန့် မထိုးလဲ”.. မေးတော့
သူက..“ အသက်ကြီးတော့ တခုခု ဖြစ်ခဲ့ရင် တံခါးမဖျက်ရအောင်လို့”..တဲ့…
အော်… ပြောဘို့ကျန်ခဲ့တော့မလို့…မီးမဖွင့်ဆို … မီးပျက်နေလို့ပါ တဲ့…(မီးသီး ကျွမ်းနေတာပါ ..)
သမီး အဖွါးကတော့ ၉၂ နှစ် ၊ သူ့ အ၀တ်တွေပျောက်ရင် ဘာအရောင် ဘာအဆင် ဘာအပွင့်ဆိုတာက အစမေးပြီး မတွေ့ရင်ရှာတော့တာပဲ …